AUTOTRADE FOREX • ​​Robotka ganacsiga wuxuu diirada saaray suuqa lacagta
Robot ganacsi oo ku saleysan suuqa Forex
AutoTrade Forex waa a robot ganacsi Suuqa lacagta ku saleysan ee Indooniisiya. Autotrade Forex waxaa la heli doonaa inta lagu jiro xagaaga 2021.
Isdiiwaangeli Autotrade Forex La heli karo xagaaga 2021
Faa'iidooyinka robotka AutoTrade Forex
Maamul oo xakamee lacagahaaga adoo adeegsanaya abka MetaTrader 4. Dhig oo la bixi markasta. Kaliya waxaad marin u leedahay maalgashigaaga: Sanduuqa aasaasiga ah + faa'iidooyinka la abuuray + danta guud.
Barnaamijka ganacsiga. Looma baahna xirfado rakibid ama ganacsi.
Xalalka ganacsigu waxay diiradda saareen sicirka lacagaha.
Midho aan la aqoon
Celcelis dakhli dadban oo aan la garanayn taariikhda.
2 bilood oo waayo aragnimo ah
Oo ay ku jiraan 2 bilood oo tijaabooyin ah xaaladaha suuqa dhabta ah.
Ku bilow khibrada ugu yaraan 200 capital.
Natiijooyinka daah-furnaanta-waqtiga dhabta ah ee uu baaro Myfxbook.
Robot-ka cusub ee ganacsiga ee ka socda PTSDFI waxaa la heli doonaa Ogosto 2021. Maalin wanaagsan ha lahaato